जनताको मृगौला झिकिँदा पनि कहाँ हराए गोविन्द केसी ? – Everest Dainik – News from Nepal
जनताको मृगौला झिकिँदा पनि कहाँ हराए गोविन्द केसी ?
गोविन्द केसी, नेपालको चिकित्साक्षेत्रमा बेथितिका विरुद्धका पर्याय मानिन्छन् । खासगरी नीजि मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धनलगायतका कतिपय विषयमा उनी दर्जनबढी अनसन समेत बसिसकेका छन् ।
कतिपयले केसीको आन्दोलन एउटा पक्षको बिरोध गरेर अर्को पक्षलाई लाभ पुर्याउने अर्थमा समेत टिप्पणी नगरेका होइनन् । तर एक आम नेपालीले उपचार नपाइ मर्नु नपरोस् भन्ने मनसायले उनको पक्षमा देशैभरी ठूलो समर्थनको लहर चल्दै आएको छ ।
तर पछिल्लो घटनामा केसीको मौनताले भने उनीमाथि नै प्रश्न जन्माएको छ ।
मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा एकजना बिरामीको मृगौला झिकिएको विषय यतिखेर चर्चामा छ । देशैभरी एमालेले निर्वाचनमा अग्रता लिएको बेला नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री दिवंगत मनमोहन अधिकारीका नाममा एमालेकै शीर्ष नेताहरुको स्वामित्वमा खुलेको अस्पतालमा भएको यो घटनाको चौतर्फी निन्दा समेत भएको छ । मिडियामा सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार, यो एक सर्वसाधारण गरीब नेपालको स्वास्थ्यमाथि गरिएको ठूलो खेलवाड हो । देशैभरी यो घटनाको निन्दा भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा नपाइनु र नीजि अस्पतालमा आम जनता छिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा जनताका नेताको नाममा खुलेको अस्पतालमा भएको घटनामा केसी भने मौन देखिन्छन् ।
हिजो केसीको आन्दोलनले नीजि अस्पतालमा यस्तै बेथिति नहोस् भन्ने विरुद्ध थियो । नीजि अस्पतालहरुले पूर्वाधारको विकास बिना नाफाका लागि मानिसको स्वास्थ्य किनबेच गर्न नपाउनु भन्ने उनको मागको आशय थियो । मनमोहन प्रतिष्ठानको सम्बन्धन समेत त्यसमा जोडिएको थियो । तर अहिले उनको मौनता ? किन र के लागि ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
गोविन्द केसी मात्रै होइनन्, स्वास्थ्य अधिकारको ठूलो आवाज निकाल्नेहरु पनि यतिखेर मौन छन् । मानौ मृगौला झिकिनु केही ठूलो कुरा हुन । मानौं अस्पतालमा एकजना बिरामीको शरीरमाथि जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ । उनीहरुको मौनताले उनीहरुको विगतको आन्दोलनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
यतिखेर यो घटना माओवादी निकटका स्वास्थ्य संस्थामा घटेको भए के हुन्थ्यो ? गोविन्द केसी सबैभन्दा अगाडि कुर्लिन्थे, त्योसँगै एमालेका शार्कदेखि भुरा माछाहरु उफ्रिन्थे । लौ खत्तमै भयो, बर्बादै भयो, मान्छे मार्दै हिँड्ने माओवादीले किडनी निकाल्नु के ठूलो कुरा भयो र ? भन्ने शब्दहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्थे । तर यहाँ कुरा एमाले निकटको स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको परेकोले सबै चुप छन् । सबै मौन छन । गोविन्दकेसीदेखि स्वास्थ्यको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्न डलर भित्र्याउने एनजीओ आइएनजीओ चुप छन् ।
यो मौनता डरलाग्दो मौनता हो । गलत गलत हो, जसले जहाँ गरेपनि । मान्छेको जीवनमाथि हुने खेलवाडलाई राजनीतिक रंग दिइने हो भने यसको असर आम नेपाली र नेपाललाई नै पर्छ ।
ट्याग्स: Dr Govind kc
बिग बास लिगः सन्दीपले पाए ब्याटिङको मौका
वेष्ट इन्डिजका स्टार क्रिकेटर स्मिथले भैरहवाबाट इपीएल खेल्ने
मदनकृष्णले छोरी सरानासँग गाए ‘पानी छाया’ (भिडिओसहित)
बीबीएलः सन्दीपको टिमले पायो विशाल लक्ष्य, डिभिलियर्सद्वारा छक्काको वर्षा!
बीबीएलः सन्दीपको टिमविरुद्ध डिभिलियर्सको शानदार अर्धशतक